Ingabe izinzwa zokuphefumula ziyasebenza ngesifo sikashukela? > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukufakwa esikhundleni sikashukela kubangela ukukhuluphala, isifo sikashukela kanye ne-Alzheimer's
Ama-sweeteners okwakha okwenziwe ngawo noma okwenziwa ngawo izinhlwayiya ayenzelwe ukunciphisa amakhalori, ukulawula isisindo, nokulawula izimo ezingamahlalakhona ezinjengoshukela. Futhi namanje, abantu abaningi basebenzisa ama-sweeteners okwenziwa, becabanga ukuthi ngale ndlela bangagwema isifo sikashukela.
Kepha kukhona izifundo ezibonisa ukuhlakanipha okujwayelekile futhi okubonisa ukuthi ama-sweeteners okwenziwa okwazi ukwandisa amazinga e-insulin egazini, abeke engcupheni yesifo sikashukela.
Igama elithi "ubuciko" ngokwalo lisho ukuthi kwenziwa ngamabomu izinguquko ekwakhekeni kwamangqamuzana e-sweetener. "Okokwakha" ngenye indlela "kwaklanywa", okungukuthi, okukuvumela ukuthi uthole imali, ngoba kuphela ekwakhiweni okwakheke kahle, izakhiwo ezintsha zamangqamuzana ungathola ilungelo lobunikazi, bese unenzuzo.
Ucwaningo lwenziwe eMedical University yaseWashington kanye namavolontiya “agcwele ngokulingana” angama-17 angatholakalanga ukuthi anesifo sikashukela. Izifundo zazihlukaniswe ngamaqembu amabili.
Ngesonto lokuqala, iqembu lokuqala lalithola ingilazi yamanzi nsuku zonke ngesigajana sikashukela esingama-75 gramu, bese kuthi eqenjini lesibili kunikezwe ingilazi yamanzi nesiphuzo esaziwa ngokuthi yi-sweetener sucralose esincibilikisiwe kuso ngesigaxa sikashukela esifanayo. Imizuzu engama-90 ngemuva kokuphathwa, wonke ahlolwe amazinga e-insulin.
Ngesonto elilandelayo, kwenziwa lo msebenzi wokuhlola, kepha iziphuzo zashintshwa - labo abaphuza i-sucralose encibilikisiwe ngeviki lokuqala bathola ingilazi yamanzi ahlanzekile. Zonke izifundo kuzo zozimbili lezi zinhlaka zithathe ushukela ongu-75 gramu kashukela. Futhi, lelo zinga le-insulin ngalinye egazini lalilungiswa futhi liqoshwe.
Naphezu kokuzama okulula, imiphumela ibalulekile. Lapho imiphumela iqhathaniswa, kwavela ukuthi lezo zifundo ezazisebenzisa kakhulu i-sucralose zazinokuhlushwa i-insulin ngaphezulu ngo-20% kunalabo baphuza amanzi angenalutho. Okusho ukuthi, ukugxuma okubukhali kushukela wegazi kungadala ukwanda kokusebenza kwe-pancreatic, okunxephezela lokhu kugxuma okungakhethi lapho kukhiqizwa ingxenye eyengeziwe ye-insulin. Uma ukuvivinya kuqhubeka, ucwaningo lukhombisa ukuthi ukwehla kwe-pancreatic kungaholela kwisifo sikashukela.
"Imiphumela yokuhlolwa kwethu ikhombisa ukuthi i-sweetener yokwenziwa ayinangozi - inemiphumela emibi," kusho umcwaningi uJanino Pepino.
Kuliqiniso, ukuhlolwa kukhombisa isici esisodwa kuphela somthelela ongemuhle wabaswidi empilweni. Ukulimala kwama-sweeteners wokufakelwa kukhulu kakhulu.
Sizoqhubeka nalesi sihloko ngokuzayo. Okwamanje, ake sixoxe ngokuthi ingabe ikhona enye indlela "yokwenziwa"? Kunempendulo eqinisekile.
I-Stevia - umkhiqizo ongokwemvelo, okunye okungenziwa njengama-sweeteners wokufakelwa
Konke okuwusizo sikunikezwe ngumama weMvelo. Futhi uma kukhulunywa nge-sweetener yemvelo futhi engenabungozi, ngaphandle kokungabaza - lo nguStevia. Akuzenzekeli ukuthi emakethe yaseJapan, iStevia ibikhona kusukela ngo-1970 futhi iyi-sweetener engenabungozi kakhulu futhi ewusizo esetshenziswa emikhiqizweni eminingi yokudla.
Lesi sitshalo sasetshenziswa njengesithokelo, kanye nomuthi iminyaka engama-400 amaNdiya aseParaguay. Ngo-1899, isazi sezitshalo saseSwitzerland uSantiago Bertoni wavakashela lapho futhi ngokokuqala ngqa wachaza lesi sitshalo. Ngo-1931, ama-glycosides, ama-molecule abangela ubumnandi balesi sitshalo, ahlukaniswa neStevia. Kwavela ukuthi ngenxa yalawa ma-greycosides ama-stevia aphindeke kathathu kunoshukela.
IStevia icishe ibe yodwa i-sweetener engenayo imiphumela emibi, okuyiphunga elimnandi kakhulu kwabanesifo sikashukela, kanye nakubantu abalandela isibalo sabo. Ungangeza i-stevia neziphuzo lapho ulungiselela izitsha ezahlukahlukene ngaphandle kokukhathazeka ngama-kilojoule angeziwe ekudleni kwakho, ngoba ngokungafani noshukela, i-stevia ingumkhiqizo ongewona ikhalori.
Abathengisi bezindawo ezinoshukela baqinisekisa ukuthi amaphilisi abo kanye ne-powders bazoqinisekisa ukuthi banesifo sikashukela, nokuthi umthwalo omningi ngeke ulengelwe emzimbeni. Ucwaningo lwamuva nje kuphela lukwenza kucace ukuthi konke kukude kakhulu nokuba mnandi, futhi abaningi abashukela ababona bonke abangane abakhulu bokulahlekelwa isisindo nabathandi bokudla okunempilo, kepha bayizitha zabo ezikhohlisayo. Kuvela ukuthi esikhundleni salawo ushukela ubuthi obufanayo obumhlophe?
Ushukela namabhungane aqala ukukhula kuphela, ngoba ushukela ubusa umhlaba ngempela. Kuyafakazelwa ukuthi kubangela umlutha mubi kunezidakamizwa ezinamandla kakhulu. Kepha imali embonini yokudla okumnandi iyabhebhetheka kangangokuba abathengisa ushukela benza konke okusemandleni ukuthi bangavinjelwe. Ngemizamo yabo wonke umuntu usekhohliwe ukuthi kuma-Middle Ages ushukela wawuthengiswa kuphela emakhemisi aseceleni kwe-morphine ne-cocaine.
Inani elikhulayo lodokotela nososayensi bayakwazi ukushicilela izifundo zabo ezingozini kashukela. Ngo-2016, kwavezwa ukuthi amakhosi kashukela axhasa ucwaningo lwamanga eHarvard uqobo, ososayensi bakhetha umbiko ngendima yamafutha ezifo zenhliziyo futhi bafihla indima efanayo kashukela. Manje kwaziwa ngokuqinisekile ukuthi ushukela usheshisa ukushaya ngamandla, uvimbela imikhumbi ekuphumuleni, lonke uhlelo lokujikeleza luyaphela.
Ushukela futhi uyaphazamisa ukumuncwa kwe-calcium ekudleni. Ushizi wasekhishini noshukela uyisidina. Sekufakazelwe ukuthi ushukela wehlisa ukuqina kwe-collagen yesikhumba, okungukuthi, unezela imibimbi. Uhlanza no-vithamini B, amunce amazinyo futhi kuholele ekukhuluphaleni. Lapho iqiniso ngoshukela luqala ukuvela, ososayensi baqala ukucabanga ukuthi bangabuyiselwa kanjani.
Kukhona izikhala zikashukela zemvelo, futhi kukhona zokwenziwa. Futhi labo nalabo ababalelwa cishe ku-40, kodwa abambalwa nje babamba iso lami. Inhlangano Yabakhiqizi Bezizwe Zonke
ama-sweeteners nokudla okuphansi kwekhalori kukhipha i-fructose, i-xylitol ne-sorbitol kusuka ku-organic ne-saccharin, i-cyclamate, i-sucralose ne-neohespiridin, i-thaumatin, i-glycyrrhizin, i-stevioside, i-lactulose - kusuka kuma-sweeteners angewona awemvelo.
Uma ungafuni ukulahla amaswidi, kepha ufuna ukunciphisa umzimba, khona-ke okunye ukufaka ushukela wemvelo ngeke kusize. Banokuqukethwe cishe kwekhalori okufanayo, futhi i-sorbitol nayo imnandi kancane. Abathengisi abasebenza ngokuthambisa amaswidi benza amaswidi adliwe ngempela.
Daria Pirozhkova, okondlayo: "Ama-sweeteners amnandi kaningi kunoshukela futhi athinta ukunambitheka, anokuqukethwe kwe-calorie zero, ayisipho kulabo abanciphisa isisindo noma ababukele isisindo sabo."
Usokhemisi ovela eTambov, eKonstantin Falberg, eminyakeni engu-140 eyedlule wasungula i-sweetener yokuqala emhlabeni, i-saccharin, emnandi izikhathi ezingama-200 kunoshukela futhi engenawo amakhalori ngokuphelele. Kepha manje sekucacile ukuthi i-saccharin, njengoshukela, ibangela ukuthi amanyikwe afake i-insulin egazini, esiza glucose ukungena kumaseli womzimba. Kepha cha. Ngenxa yalokhu, ukuzulazula kwe-insulin ezungeza izikejana kuphela kubangela ukumelana ne-insulin, okuholela ekukhulupheni kanye nohlobo 2 sikashukela. Lokhu kwaqinisekiswa ngocwaningo lwaseCanada lapho iziguli eziyizinkulungwane ezingama-400 zahlanganyela.
Ukuhlolwa kwama-sodas wokudla ngonyaka we-2017 kukhombisile ukuthi umbhangqwana wezimbiza zansuku zonke eziphansi ezinekhalori ezibhalwe ukuthi "0% kilojoule", ovame ukusebenzisa i-aspartame (E951) kanye ne-sodium cyclamate (E952), ukhulisa ubungozi bokushaywa unhlangothi amahlandla ama-3 kanye nengozi yokuwohloka komqondo noma isifo se-Alzheimer's.
Ekudla, ungathola i-stevia ne-fructose. IStevia yisithako esivela emaqabunga esitshalo saseBrazil. Kuthengiswa emakhemisi ngohlobo lwayo olumsulwa. Ukufakwa esikhundleni ushukela kuhle, ngoba ngobumnandi obufanayo budinga izikhathi ezingama-25 ngaphansi. Kepha iStevia ibiza ngaphezulu kwezikhathi ezingama-40 kunalokho kucolisisiwe, futhi i-fructose ishibhile kakhulu, ngakho-ke noma yisiphi isitolo sivele sine-counter yonke nemikhiqizo ye-fructose. Kodwa lokhu akuyona leyo fructose yezithelo. Umthamo ophephile we-fructose ungama-40 amagremu ngosuku. Ngakho-ke ayikho indlela efanelekile yokufaka ushukela esikhundleni. Kulula kakhulu ukunciphisa indima yamaswidi empilweni yakho bese uxubha amazinyo akho njalo. Imininingwane ikuhlelo oluthi "OurPotrebNadzor".
Yikuphi okuphephile: ushukela noma izinongo zokufakelwa?
Eminyakeni yamuva nje, isixhumanisi sesiqaliwe ekugcineni phakathi kokudla ushukela ngokweqile kanye nokukhuluphala, isifo sikashukela nesifo senhliziyo. Njengoba idumela loshukela lalilinyazwa kakhulu, abenzi bezimnandi zokuthambisa banquma ukungaphuthelwa isikhathi bese benyuka.
Ama-sweeteners okwenziwa manje anezelwa emashumini ezinkulungwane zokudla nezitsha, kuzenza zibe ngesinye sezithako zokudla okunempilo emhlabeni. Ngokuthatha ithuba lokulebula "ama-zero kilojoule" kumkhiqizo, abakhiqizi bakhiqiza iziphuzo ezingenakubalwa zokudla neziphuzo eziphansi kanye nama-dessert anomnandi ngokwanele ukwanelisa ngisho nezinyo elimnandi kakhulu.
Kepha hhayi konke lokho kukhazimula kuyigolide. Kwanda ukushicilelwa kwezifundo ezidala lokho Izinganekwane Zokuphepha Zokubumba Okumnandi. Manje sekufakazelwe ukuthi ukusebenzisa amanani amakhulu ala makhemikhali kungaholela ekuphanjukazeni komzimba kanye nokuphazamiseka komzimba.
Engqungqutheleni ye-Experimental Biology 2018 ebibanjelwe eSan Diego ngasekupheleni kuka-Ephreli, ososayensi baphakamisa lolu daba futhi bahlanganyela kuze kube manje imiphumela esezingeni eliphakathi, kodwa ethokozisayo yocwaningo olusha.
Okusha kubuke abakwaSteneners
UBrian Hoffman, uprofesa oxhumanisa nobunjiniyela be-biomedical at Marquette University kanye ne-University of Wisconsin College of Medicine eMilwaukee, kanye nomlobi walolu cwaningo, uyachaza ukuthi kungani enendaba nalolu daba: "Yize ushukela uthathelwa indawo ukudla kwethu kwansuku zonke nabenzi bokudla okungenamsoco, kukhona ukwanda okukhulu kokukhuluphala kanye noshukela kubantu." Umhlaba usabonakala. "
Ucwaningo lukaDkt Hoffman njengamanje wukutadisha okujulile kwezinguquko ze-biochemical emzimbeni womuntu okubangelwa ukusetshenziswa kwegama lokufakelwa. Kufakazelwe ngokuthembekile ukuthi inani elikhulu le-khalori yama-kilojoule aphansi lingafaka isandla ekwakhekeni kwamafutha.
Ososayensi babefuna ukuqonda ukuthi ushukela kanye nama-sweeteners kuthinta kanjani ukufakwa kwemithambo yegazi - i-vascular endothelium - besebenzisa amagundane njengesibonelo. Izinhlobo ezimbili zikashukela zazisetshenziselwa ukubhekwa - ushukela kanye ne-fructose, kanye nezinhlobo ezimbili zamakhompiyutha angenamakhalori - i-aspartame (engeza u-E 951, amanye amagama alinganayo, uCarrerel, uSurrasit, uSladex, uSlastilin, u-Aspamiks, i-NutraSweet, uSante, Shugafri, i-Sweetley) ne-potasium acesulfame i-E950 eyengeza, eyaziwa nangokuthi yi-acesulfame K, otizon, i-Sunnet). Izilwane zaselabhorathri zazondliwa ukudla ngalezi zithasiselo noshukela amasonto amathathu, bese ukusebenza kwazo kuqhathaniswa.
Kwavela ukuthi bobabili ushukela kanye nama-sweeteners badonsa kakhulu isimo semithambo yegazi - kodwa ngezindlela ezihlukile. "Ezifundweni zethu, kokubili ushukela kanye nokwenza izinzwa zokunambitha kubukeka sengathi kubangela imiphumela emibi ehambisana nokukhuluphala kanye nesifo sikashukela, yize kusetshenziswa izindlela ezihlukile kakhulu," kusho uDkt Hoffman.
Kokubili ushukela kanye nama-sweeteners wokufakelwa kubangele ushintsho enanini lamafutha, ama-amino acid, namanye amakhemikhali egazini lamagundane. Izinhlayiya zokwenziwa, kuvela ukuthi, zishintsha indlela umzimba osebenza ngayo amafutha bese ithola amandla ayo.
Umsebenzi omningi manje uzodingeka ukuthola ukuthi lezi zinguquko zingasho ini ngokuhamba kwesikhathi.
Kwatholakala futhi, futhi kubaluleke kakhulu, ukuthi i-sweetener acesulfame potassium iqoqana kancane emzimbeni. Ekugxilweni okuphezulu, ukulimala kwesithambo segazi kwakunzima kakhulu.
"Siphawule ukuthi esimweni esilinganiselwe, umzimba wakho ucubungula ushukela ngendlela efanele, futhi lapho uhlelo lugcwele kakhulu isikhathi eside, lo mshini uyabhidlika," kuchaza uHoffmann.
"Siphinde sabona ukuthi ukufaka ushukela esikhundleni sokwenza i-sweeteners yokudla okungenamsoco kuholela kwizinguquko ezingezinhle kuma-fat and metabolism."
Maye, ososayensi okwamanje abakwazi ukuphendula umbuzo oshaqisa kunazo zonke: yikuphi okuphephile, ushukela noma okumnandi? Ngaphezu kwalokho, uDkt Hoffan uthi: “Umuntu angasho ukuthi - ungasebenzisi amaswidi okwakha, futhi kuze kube sekupheleni. Kepha konke akulula kangako futhi akucaci ngokuphelele. Kepha kwaziwa ngokuqinisekile ukuthi uma udla ushukela omningi njalo futhi ngamanani amaningi, ubungozi bez imiphumela engemihle yezempilo buyanda ”- ngamafuphi usosayensi.
Maye, kunemibuzo eminingi kunezimpendulo kuze kube manje, kodwa manje kuyacaca ukuthi isivikelo esingcono kakhulu ezingcupheni ezingabakhona kungukulinganisela ekusebenziseni imikhiqizo enoshukela kanye nama-sweeteners okwenziwa.
Izikhundla zesifo sikashukela okwenziwe ngesifo sikashukela: zivunyelwe noma cha? Cha!
Ukufakwa esikhundleni sikashukela okwenziwe ngokungejwayelekile kungashukumisa ama-receptors ukunambitheka okumnandi olimini, kepha ngasikhathi sinye awaziphathi amakhalori. Ngalesi sizathu, bavame ukubizwa ngokuthi imikhiqizo "yokudla" yokudla, kufaka phakathi leyo ekhonjiselwe ushukela.
Izindawo ezinoshukela ezivamile
Ukufakwa esikhundleni sikashukela wokufakelwa kungabuthinta kanjani ushukela wegazi lakho?
Umzimba womuntu wenzelwe ukugcina ushukela wegazi ungahlali njalo.
Amazinga kashukela akhuphuka lapho sidla ukudla okugcwele ama-carbohydrate agaya ukudla kalula, njengesinkwa sikakolweni, ipasta, amazambane nobuthakathaka. Ukugaya, lokhu kudla kukhipha ushukela, ongena egazini.
Lapho lokhu kwenzeka, umzimba ukhipha i-insulin, i-hormone esiza ushukela ukubale egazini labo bese ingena kumaseli, lapho izosetshenziswa khona njengomthombo wamandla ngokushesha noma igcinwe njengamafutha.
Uma izinga likashukela wegazi liyancipha, ngokwesibonelo, ngemuva kwamahora ayisishiyagalombili kokungasasebenzi ekudleni, isibindi sidedela izinqolobane zaso ushukela ukuze izinga le-glucose lingawi ngaphansi kokujwayelekile.
Ukufakwa esikhundleni sikashukela okwenziwe ngomzimba kuthinta kanjani lezi zinqubo?
Kukhona imibono emibili njengamanje.
Esokuqala kungenxa yokuthi i-insulin ingakhishwa noma ngabe ushukela ungangeni egazini, kepha ubuchopho buzwa ubukhona beswidi emlonyeni, njengoba bekukhona nokuvuselelwa okumnandi kokunambitha.
Kuze kube manje, le hypothesis ayikaqinisekiswa ngokwesayensi. Kepha ezinye izifundiswa zikholelwa ukuthi unjalo
2. Ngokuya komunye umcabango, ngendlela, engafaki incazelo yokuqala, ukwephula umthetho kumazinga kashukela kungenzeka ngenxa yokungalingani ku-microflora yamathumbu okubangelwa ama-sweeteners wokufakelwa.
Okwamanje, kuyaziwa ukuthi i-microflora enesifo ingenye yezizathu zokuthuthukiswa kokumelana kwe-insulin kwamangqamuzana, okuwukuthi, umbuso we-prediabetesic.
Izikhundla zikashukela zokwenziwa zibhubhisa i-microflora ezuzisayo
Ngakho-ke kakade ocwaningweni oluthile lwesayensi kwaboniswa ukuthi ukusetshenziswa kwamakhemikhali okwenziwa ngabasebenza ngokuzithandela kukhuphula izinga labo le-HbA1C - umaki kashukela wegazi.
Kokunye ukuhlola okudumile okwenziwa ososayensi bakwa-Israyeli ngonyaka ka-2014, amagundane anikezwa esikhundleni soshukela okwenziwe amasonto ayi-11. Kancane kancane, baqala ukuba nezinkinga nge-microflora yamathumbu, futhi amazinga kashukela akhuphuka.
Kodwa okwangihlaba umxhwele kakhulu ukuthi lesi simo saphenduka esingenakuphindeka. Futhi lapho amagundane belashwa nge-microflora, ushukela wabo ubuyela kokujwayelekile.
Olunye ucwaningo olumangazayo luka-2007 lwaluku-aspartame. Kungani kumangalisa? Yebo, ngoba imiphumela yayo yayihluke kakhulu kulokho obekulindelekile.
Ososayensi bebezokhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-aspartame esikhundleni sikashukela setafula ekuphekeni kwasekuseni akulithinti izinga le-glucose esegazini.
Kodwa-ke, bahlulekile ukuthola umphumela obuhlelwe. Kepha bekungenzeka ukukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-sucrose kanye nokusetshenziswa kwe-aspartame esikhundleni salokho kukhulisa ushukela namazinga we-insulin. Futhi lokhu ngaphandle kweqiniso lokuthi ngesikhathi sekhefu esinama-aspartame, amakhalori angaphansi ngama-22%.
Abathengisi abasebenza ngokuthambisa izinhlungu bavimbela ushukela futhi banciphise isisindo
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukudla okubizwa ngokuthi "ukudla", lapho kukhona khona oshukela, kuvuselela isifiso sokudla, kwandise izifiso zamaswidi namanye ama-carbohydrate, futhi kunomthelela ekwakhekeni ngokushesha kwamafutha omzimba. Futhi yandisa ukumelana komzimba ne-insulin futhi ngaleyo ndlela kungaba nomthelela ekwakhiweni kwesifo sikashukela, noma kuphazamise ukwelashwa kwayo.
Esokuqala sesixoxiwe ngenhla futhi sihlotshaniswa nomphumela obulalayo wokufakwa kwezibiliboco ku-microflora yamathumbu, evikela umzimba ebubini obuhlukahlukene, kubandakanya nesifo sikashukela.
Isizathu sesibili sokuthi kungani ukusetshenziswa kwama-sweeteners kuholela ekukhulupheni kanye nashukela kuyinto yokufisa okwandayo kwamaswidi nokudla okunesitashi. Lapho umuntu ezwa ukunambitheka okumnandi, kepha empeleni angakutholi ushukela, umzimba wakhe uyakuqonda lokhu sengathi kunokudla okuncane kakhulu. Ngakho-ke, kuyadingeka futhi ukudla ama-carbohydrate angazange atholakale.
Ubudlelwano phakathi kokunambitheka okumnandi ngaphandle kwama-kilojoule kanye nesifiso esandayo sokudla, ikakhulukazi esinxanela ama-carbohydrate, kuxoxwe ngenkuthalo ezincwadini zesayensi iminyaka engama-2. Kodwa-ke, ama-sweeteners okwenziwa asebekiwe ngabakhiqizi bawo njengabasizi. Futhi abantu basakholelwa kukho.
Ubufuna ukwazi: ingabe ama-sweeteners abangela isifo sikashukela sohlobo II?
Usuvele uzwile ukuthi ukudla okunoshukela kubangela ukumelana ne-insulin kanye nohlobo II sikashukela. Amaswidi amaningi owadlayo - akukhathalekile ukuthi uluju olwenziwe ekhaya noma ushukela ocwengekile - lapho uthola i-insulin eningi emngcwabeni wakho osegazini ukuze ulawule ushukela wegazi lakho. Kufika isikhathi lapho indlala egcwele kakhulu ingasakwazi ukukhiqiza i-insulin ngamanani anele ukulawula ushukela wegazi, okuholela kuhlobo lwesifo sikashukela II.
Kepha kwenzekani uma ushukela uthathelwa indawo ngama-sweeteners wokufakelwa? I-American Diabetes Association ibhala kwiwebhusayithi yayo ukuthi ama-sweeteners abhekwa ephephile ngokuya ngamazinga wase-US Food and Drug Administration and "angasiza ukunqoba isifiso sokudla into emnandi." Kodwa-ke, abanye ochwepheshe bayangabaza.
“Ngamafuphi, asazi ukuthi kwenzekani uma udla indawo esikhundleni sikashukela,” kusho uDkt Robert Lustig, udokotela ovumayo nge-endocrinologist ofunda izakhiwo zikashukela e-University of California, eSan Francisco. "Sinemininingwane evumela ukuthi senze imibono ethile, kepha lokhu akwanele ukwenza isinqumo sokugcina kumuntu ngamunye othokomele."
Ngokusho kocwaningo olwenziwe ngo-2009, abantu abaphuza i-soda yokudla nsuku zonke banesifo se-metabolic okungenzeka ukuthi singama-36% kanti uhlobo lwe-II sikashukela sinamathuba angama-67% kunalabo abangaphuzi ukudla noma i-soda ejwayelekile.
Amaqiniso amasha, noma kukude ukuthi anqume, anolwazi kakhulu.
Ucwaningo olwenziwe ngo-2014 kwa-Israyeli lwathola ukuthi ama-sweeteners wokufakelwa aguqula i-microflora yamathumbu yamagundane, ngaleyo ndlela abangele izifo ze-metabolic. Ocwaningweni lwamuva nje, ososayensi abavela eNyuvesi yaseWashington eSt. Louis baphoqa abantu abakhuluphe ngokweqile ukuba baphuze imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuba basebenzise ushukela wangempela, noma amanzi angenalutho, noma amanzi afakwe uspalose. Abaphenyi babefuna ukwazi ukuthi lizoshintsha kanjani izinga le-insulin yezifundo zokuhlolwa ngaphansi kwethonya lebhomu likashukela, uma ngaphambi kwalokho umzimba wagcwala amanzi noma i-sweetener yokwenziwa.
"Uma i-sweetener ibiphephile, kufanele sicabange ukuthi imiphumela yazo zombili lezi zivivinyo izofana," kusho uLustig. Kepha uDkt Yanina Pepino, umbhali oholayo walokhu kuhlolwa, uthi ngaphansi kwethonya le-sweetener, imizimba yezifundo yathuthukisa i-insulin engaphezulu kwe-20%.
"Umzimba kufanele ukhiqize i-insulin eningi ukuze ukwazi ukubhekana noshukela ofanayo, okusho ukuthi i-sucralose ibanga ukumelana ne-insulin", kuchaza uPepino.
Lapho into emnandi ingena olimini lwakho - akunandaba ukuthi ushukela ojwayelekile noma obambele lona - ubuchopho bakho namathumbu kusayina kuma-pancreas ukuthi ushukela usendleleni. Ama-pancreas aqala ukukhipha i-insulin, elindele ukuthi inani ushukela osegazini selizonyuka. Kepha uma uphuza isiphuzo esinoshukela, ne-glucose ayigelezi, amanyikwe alungele ukuphendula kunoma yiliphi ushukela egazini.
Kepha izinhlwayiya zokwenziwa zihlukile komunye nomunye. "Umehluko ubonakala emazingeni amakhemikhali nawokwakhiwa," kusho uPepino. Ngakho-ke, kunzima ukwenza okujwayelekile lapha. Uyachaza: “Kulungile ukukhuluma ngokuthi hlobo luni lwezimpawu abamele badlulisela kulo ubuchopho namanyikwe,” echaza. "Kepha uma sigwinyiwe, izinhlwayiya ezihlukile zizoba nemiphumela ehlukene kumetabolism."
UPepino nethimba lakhe manje bazama ukulandelela ukuthi i-sucralose ingalithinta kanjani izinga le-insulin labantu abanciphile kunabantu abagcwele. Kepha isithombe esigcwele sendlela ama-sweeteners ayithinta ngayo ingozi yokuthola ukumelana ne-insulin kanye nohlobo II sikashukela asikapheli. Uthi: “Kudingeka senze ucwaningo olwengeziwe.
ULustig ugcizelela yena. Uthi: “Ukuhlola okuhlukile kunikeza isizathu sokukhathazeka. "Ngaphandle kokungabaza, i-soda yokudla ihlotshaniswa nesifo sikashukela, kodwa leso yisizathu noma umphumela, asazi."
Ingabe i-sweetener iyingozi: izinhlobo nemiphumela yokusetshenziswa
Ukusetshenziswa ushukela ngohlobo 2 sikashukela kuvinjelwe. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo uqukethe ama-carbohydrate alula, abangela ukwanda okusheshayo nokubonakalayo kwamazinga kashukela egazini. Ukuze abanesifo sikashukela bangayeki amaswidi, sekwenziwe izinhlobo eziningi zikashukela ezingenabungozi. Banokwakheka okuhlukile, kufanelekile ukubangeza etiyeni nakwezinye izitsha. Kodwa-ke, lo mkhiqizo unezindawo eziningi ezingezinhle. Ukulimazeka nezinzuzo zako kubhekwa kokuqukethwe.
Ukuthola ukuthi iluphi uhlobo lukashukela olungeyona ingozi kakhulu, kubalulekile ukuthola ukuthi kungani ulusebenzisa ngokuphelele. Yiziphi izindawo ezinhle zensiza ephephile ushukela futhi iziphi izinzuzo zayo?
Okokuqala, ngemuva kokusetshenziswa kwayo akukho ukukhuphuka kweglucose yegazi. Kubantu abaphilile, lokhu, ngokweqiniso, kusiza ukuvikela ukukhula kwesifo sikashukela, futhi kwabanesifo sikashukela, kuyadingeka ukusebenzisa indawo yokubambela esikhundleni sikashukela olula,
Ngaphezu kwalokho, i-sweetener enempilo yabantu abakhuluphele iyindlela ehlukile, ngoba cishe ayinawo amakhalori. Ngalesi sizathu, kuyaziwa futhi phakathi kwabesifazane abakhulelwe,
Ngokwe-theory, i-sweetener engenabungozi ayinangozi yamazinyo. Awumubi njengoshukela, uthinta i-enamel yezinyo, awuchithi futhi awubangeli ama-caries,
Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi, amaphilisi we-sweetener asetshenziswa yilabobantu okuphuza kwabo kwesamba esikhulu soshukela kubangela ukusabela kwesikhumba - ukulunywa, ukuqubuka, ukukhonkotha.
Ngaphandle kokuthi umbuzo wokuthi ngabe ama-sweeteners ayingozi uhlala umbuzo ovulekile, asetshenziswa ngenkuthalo ekwenziweni kwemikhiqizo yokunciphisa isisindo, kanye nakwisifo sikashukela. Zibuye futhi zibe yingxenye yokutshungatha, amakhekhe “amancane”, avikela kumakheli, njll. Ukusetshenziswa kwawo kuvunyelwe yi-GOST ngenxa yokuthi ngezikhathi ezithile udla i-sweetener engenabungozi, khona-ke ngeke kube nokulimala kwempilo. Kodwa ukusetshenziswa njalo kwemikhiqizo enjalo akuphephile.
Naphezu kokuphepha komuthi okusobala, umbuzo wokuthi kufanele usetshenziswe ngabantu abaphilile nabanesifo sikashukela usengumbuzo ovulekile. Ama-sweeteners amaningi ayingozi futhi ukusetshenziswa kwawo kumuntu ophilile noma onesifo sikashukela kungaba nemiphumela engemihle.
Ukuphendula umbuzo wokuthi ngabe esikhundleni soshukela kuyingozi yini nokuthi kungakanani, ungabheka uhlobo lwayo kuphela. Wonke ama-sweeteners angahlukaniswa ngamaqembu amakhulu - wemvelo nawokwenziwa. Ukulimala nezinzuzo zezidakamizwa kula maqembu kwehlukile.
Ukufakwa esikhundleni semvelo kungathathwa njengokuphephe kancane. Lokhu kufaka i-sorbitol, i-fructose, i-xylitol. Ukulimala kwabo okuyinhloko noma umphumela oseceleni kungokuqukethwe kwekhalori ephezulu. Cishe kuqhathaniswa noshukela osobala. Ngalesi sizathu, i-sweetener engenangozi engenangozi eyenziwe ngezithako zemvelo icishe isetshenziswe ekwenziweni kwemikhiqizo yokunciphisa isisindo. Futhi, ngokusetshenziswa okukhulu, isakwazi ukudala ukwanda kwezinga likashukela,
Izithasiselo ezihlanganisiwe zenziwe ngezakhi zamakhemikhali ezingatholakali emvelweni. Zihlukile kwezemvelo ngoba azikwazi ukukhuphula izinga likashukela ngisho nokusetshenziswa okubalulekile. Ngaphezu kwalokho, aphansi kakhulu kumakhalori futhi awabangeli ukuzuza kwesisindo. Kodwa-ke, izinzuzo kanye nokulimazeka komkhiqizo onjalo akuhlukani. Ukufakwa esikhundleni se-synthetic kunomphumela omubi kuwo wonke amaqembu wezitho zomzimba, kumuntu ophilile nakoshukela. Leli qembu lifaka i-sweetener ephephe kunazo zonke kusuka ku-aspartame yokwenziwa, kanye ne-saklamate ne-saccharin.
Njengoba kushiwo ngenhla, ukusetshenziswa kanyekanye kwezithasiselo zokwenziwa ngeke kubangele umzimba, njengomuntu ophilile, noma onesifo sikashukela, kulimaze kakhulu. Kepha ngokusetshenziswa njalo, imiphumela emibi nezifo zingakhula. Ngakho-ke, akufanele usebenzise indawo yamashukela njalo ukunciphisa umzimba, kungcono ukwenqaba amaswidi kuphela kuze kube yilapho isisindo sibuyela kokujwayelekile.
Kwabanesifo sikashukela, ayikho enye indlela yokwelapha enjalo. Ukuphela kwendlela yokwehlisa umphumela ongemuhle empilweni ukusebenzisa isibalo esincane sabameleli. Ngaphezu kwalokho, kungcono ukunikela okuthandwa yibo bemvelo nokulawula ukungena kwabo ukuze ugweme ukwandisa isisindo noshukela wegazi.
Lapho uphendula umbuzo wokuthi yini elimazayo ku-sweetener, kuyadingeka ukusho ukuthi yiziphi izifo ezingadala ukusetshenziswa kwayo isikhathi eside. Izinhlobo zezifo zincike ohlotsheni lwe-sweetener olusetshenzisiwe.
Ngaphezu kwalokho, kungahle kube nezinkinga nge-digestibility yama-sweeteners okwenziwa nokususwa kwawo emzimbeni.
Lapho uzibuza ukuthi iyiphi i-sweetener engayilimazi kakhulu, kufanelekile ukubheka kuphela ama-sweeteners wemvelo. Indawo ebushukela ehamba phambili phakathi kwabo yi-stevia. Kwezici zayo ezinhle, okulandelayo kungahlukaniswa:
Okuqukethwe kwekhalori okuphansi kuqhathaniswa nabanye ozakwethu bemvelo, futhi ngakho-ke kuyindondo enhle kakhulu yokunciphisa isisindo,
Ukuntuleka kokunambitheka (ama-sweeteners amaningi emvelo nawokwenziwa abonakala ngokuba khona kokunambitheka noma iphunga elingaziwa),
Ayishintshi imetabolism futhi ayikhulisi isifiso sokudla.
Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi njenge-sweetener, i-stevia ayenqunyelwe ukusetshenziswa emazweni e-EU, kanye nase-USA naseCanada. Yize ingenazo izinto ezinobungozi, futhi isipiliyoni sokusetshenziswa kwaso eJapan (esisetshenziswe iminyaka engaphezu kwengama-30 njenge-sweetener ewusizo) sikhombisile ukuthi akubangeli imiphumela emibi, azikho izifundo ezisemthethweni ngomthelela wazo empilweni yabantu.
Ukwazi ukuthi iyiphi indawo ephekela ushukela ephephe kunazo zonke, ungaligcina ngempumelelo ushukela wakho ngokwesilinganiso futhi uvikele ukukhuluphala ngokweqile kwesisindo. Noma kunjalo, i-stevia ibiza kakhulu futhi akuwona wonke umuntu ongayikhokhela. Kulokhu, abantu ngezikhathi ezithile basebenzisa ezinye izindlela, inzuzo noma ukulimala kwako kungahluka. Kunoma yikuphi, lapho uthatha indawo ye-sweetener, kubalulekile ukukhetha i-analogue yemvelo ye-stevia.
Ama-sweeteners abangela ushukela, ososayensi bakwa-Israyeli batholakala
Ama-sweeteners okwakha, adalwa futhi akhangiswa njengendlela yokudla okunempilo, ukunciphisa isisindo kanye nokulwa nesifo sikashukela, kube nemiphumela emibi ngendlela yezinguquko ze-metabolic, ezingabangela lezo zifo ezibizwa ngama-sweeteners ukuthi zilwe, i-sciencerussia.ru ibhala ngokubhekisele Umsebenzi Wezindaba we-Weizmann Institute (Israel).
Ososayensi bahlola uchungechunge ngamagundane, babanikeza izinhlobo ezintathu zokufaka ushukela okwenziwe ngokuthandwa kakhulu manje, futhi esigabeni esilandelayo sesifundo, namavolontiya angabantu. Ngokusho kocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Nature, ngokuthinta ukwakheka kanye nokusebenza kwe-microflora yamathumbu, izinto eziqukethwe kuma-sweeteners wokufakelwa zisheshisa ukuthuthukiswa kokubekezelelana kwe-glucose nokuphazamiseka okujulile kwe-metabolic. Lokhu kuholela ekuphambeni ngqo kokusetshenziswa kwama-sweeteners: baneqhaza ekukhuluphiseni kanye nasoshukela, okumanje osubhebhethekisa ngempela.
Umqondisi obambisene nabo ocwaningweni uDkt Eran Elinav ukhumbule ukuthi “Ubuhlobo bethu namagciwane ethu ezinsini anomthelela omkhulu ekutheni ukudla esikudlayo kusithinta kanjani. Okuhlaba umxhwele ikakhulukazi ukuhlangana kwalokhu nokusetshenziswa kwama-sweeteners okwenziwa. Ngama-microflora, baholela ekwakhiweni kwalezo ziphazamiso ezakhiwe ngabo. Ukuze uvikele lezi zimo, kufanele kubuye kuqinisekiswe ukusetshenziswa kwalezi zinto ezinkulu futhi ezingalawulwa. ”
Ama-sweeteners okwakha umzimba abangela ukukhuluphala futhi andise ubungozi besifo sikashukela sohlobo 2: ucwaningo
Emashumini eminyaka adlule, ngenxa yokwanda kokuqwashisa ngengozi yezempilo yokudla ushukela ngokweqile, ukusetshenziswa kweziphuzo zekhalori eziyizigaxa kukhuphuke kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, ucwaningo olusha lukhombisa ukuthi ama-sweeteners nawo angaholela ekwakhiweni kwesifo sikashukela kanye nokukhuluphala, futhi ukuguqulwa kokudla iziphuzo ezinekhabhoni kungabizwa ngokuthi yisinyathelo "kusuka emlilweni kuye ngomlilo."
Ososayensi eWisccinin College of Medicine bethule ucwaningo lwabo (ngokushintshwa kwamakhemikhali emzimbeni ngemuva kokudla ushukela kanye nokuthatha indawo yalo) engqungqutheleni yonyaka ye-Experimental Biology ngo-Ephreli eSan Diego, eCalifornia.
"Ngaphandle kokungezelelwa kokudla okumnandi okwenziwe ekudleni kwethu kwansuku zonke, kusekhona ukwanda okukhulu kokukhuluphala nesifo sikashukela," kusho umlobi ocwaningwayo uBrian Hoffmann. "Ucwaningo lwethu luthole ukuthi ushukela kanye nobumnandi bokufakelwa babangela imiphumela emibi ehlobene nokuphazamiseka kwemizwa kanye nesifo sikashukela, yize kungenziwa ngendlela ehlukile kakhulu."
Abaphenyi benziwa e-vitro (in vitro) nasezivivinyweni ze-vivo (ku-vivo). Iqembu lososayensi londla iqembu elilodwa lamagundane ngokudla okuphezulu kushukela noma i-fructose (izinhlobo zikashukela), kanti elinye nge-aspartame noma i-acesulfame potassium (i-zero-calorie artificial sweeteners). Ngemuva kwamasonto amathathu, ososayensi bathola umehluko omkhulu ekugxileni kwamafutha kanye nama-amino acid kumasampula egazi lesilwane.
Imiphumela ikhombisa ukuthi ama-sweeteners wokufakelwa aguqula indlela amafutha acutshungulwa ngayo umzimba futhi akhiqiza amandla. Ngaphezu kwalokho, i-acesulfame potassium inqwabelana egazini, ukugcwala okukhulu okunethonya elimazayo kumaseli wobuso obungaphakathi bemithambo yegazi.
"Ungabona ukuthi ukusetshenziswa ushukela ngokulinganayo emzimbeni, inqubo yokusebenza kwayo. Lapho lolu hlelo lugcwele ngokweqile isikhathi eside, lo mshini uyabhujiswa, ”kusho uHoffmann. "Siphawulile nokuthi ukufaka esikhundleni salaba bantu ushukela ngezinto ezingezona ezinempilo zokudla okuholela ekutheni kube nezinguquko ezingezinhle emetheni yamandla namandla."
Imininingwane etholakele ayinikezi impendulo ecacile, ebi kakhulu - ushukela noma ama-sweeteners wokufakelwa, lo mbuzo udinga ukufundelwa okuthe xaxa. Ososayensi batusa ukuba ngokulinganisela ekusebenziseni ushukela kanye nalokho okwenziwealo.
URosen V.B. Okuyisisekelo kwe-Endocrinology. EMoscow, eMoscow State University Publishing House, 1994.384 kk.
IVasyutin, A.M. Buyisa injabulo yempilo, noma Indlela yokuqeda ushukela / A.M. IVasyutin. - M: IPhoenix, 2009 .-- 181 k.
Wayne, A.M. Hypersomnic Syndrome / A.M. Wayne. - M: Imithi, 2016 .-- 236 k.